Ny Krizy Nokleary Iraniàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2017 5:05 GMT
Lany tsy nisy nitsipaka tao amin'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana ny hanomezana sazy an'i Iràna noho ny tsy nahavitany nampitsahatra ny fandaharanasa fanatavezana oranioma any aminy tamin'ny 23 Desambra 2006.
Na teo aza ny fahasarotan'ny raharaha, faritan'ny filoha iraniàna Mahmoud Ahmadinejad ho tsy dia misy dikany ny fanapahankevitry ny Firenena Mikambana ary nampanantena izy fa hanohy ny fanatavezana oranioma.
Ao amin'ny Forever Under Construction,(Anaty Fananganana Tsy Hita Fetra) no ahafantarantsika momba ny fanentanana manohitra ny ady: Enough fear (Ampy izay ny tahotra). Fanentanana natombok'ireo olontsotra vonona hitsangana sy handà. Io tranonkala io no hanangona sy hamoaka ireo sarin'ny olona avy any Etazonia, Iràna ary ireo firenena hafa maneho ny endrika ekena erantany atao amin'ny tànana ho entina milaza ny “tsia / atsaharo !”
Ao amin'ny bilaoginy, nanoratra i Robo:“Sahiran-tsaina aho tato ho ato. Ianareo koa. Tato ho ato isika dia tena niasa saina fatratra sy verivery saina tsy nifantoka tamin'ny raharahantsika andavanandro.
Lazain'i Pouya [Fa] fa nahomby ny dian'ny Sekretera anerikàna misahana ny raharaha ivelany Condoleeza Rice’ tany Afovoany Atsinanana mba ho fampiraisana ireo firenena Arabo madinika sy vaventy hanohitra an'i Iràna. Ambaran'ilay bilaogera fa fony tany Afovoany Atsinanana i Etazonia, nanao fitsangantsanganana tsy dia nisy nilàna azy tany Amerika Latina ny filoha Iranàna. Ampian'ilay bilaogera hoe nisavoritaka ny vahoaka Iraniàna momba ny toedraharaha misy ankehitriny (2007).
Haji Washington [Fa] milaza fa tsy tokony hatahotra an'i Etazonia i Iràna satria ireo firenena Arabo ao amin'ny Golfa Persika no tena loza mananontanona. Ampian'ilay bilaogera fa misy ny fiarahan-dia iraisampirenena hamelezana an'i Iràna ary efa manamafy ny sazy ireo banky tandrefana, raha i Japàna kosa nampihena ny fandraharahany ara-toekarena.
Ali Mazroi [Fa], politisiana reformista, miresaka momba hadisoan'ny kajikajin'i Iràna amin'ny fitantànany ilay olana nokleariny. Lazainy fa tsy nahamaika an'i Etazonia ny handefa ny raharaha nokleary iraniàna ho any amin'ny Filankevi-Pilaminana. Araka ny ambaran'ilay bilaogera, nandresy lahatra ireo firenena rehetra i Etazonia hoe ny hany vahaolana tokana amin'ny olana nokleary iraniàna dia ny Filankevi-Pilaminana.
View from Iran manoratra amin-keso sy hanihany momba ny resaka iray nifanaovan'ireo mpinamana mikasika ny ady mety hiseho: “Antenaiko amin'ny foko manontolo fa tsy hampiasa balafomanga Shahab i Iràna. Raha manao izany ry zareo, dia io no ho fiandohan'ny Ady Lehibe Fahatelo, hoy ny namana iray. Maninona ianareo no misaina toy izany? Ny zavatra rehetra afa-tsy izay nokinendriny no hopetahany. Balafomanga iray natao hikendrena an'i Israely no hamely an'i Arabia Saodita na Rosia na firenena sasany hafa. Nihomehy ny rehetra. Samy manao ny raharahany isanandro ny tsirairay: mampirina saffron sy trondro lamàtra.”
Mohammad Ali Abtahi, politisiana reformista no sady bilaogera, milaza hoe ny filoha teo aloha Khatami sy Rafsanjani hatramin'i Karoubi, ilay mpitondra tenin'ny antenimiera iraniàna fahiny, dia imbetsaka nikarakara fihaonana niarahana tamin'ireo filoham-panjakana sy manampahefana avy any ivelany mba hiresahana momba ireny toejavatra tena mampidi-doza be ireny.
Abthai mitatitra hoe araka ny lazain'Ing Sadr, lefitra fahiny tao amin'ny ministeran'ny raharaha ivelany, tsy afaka miantehitra amin'i Siria i Iràna rehefa mahatsiaro ho tandindonin-doza, hifanaraka amin'i Etazonia ry zareo. Ampiany fa sambany izao no nisy sazy iraisampirenena napetraka amin'i Iràna.